မွကှေကျတှကေို အခြိနျခဏအတှငျးမှာပဲ သိနျး ခုနှဈထောငျကြျောဖိုးအထိရောငျခနြိုငျခဲ့တဲ့ ဇနီးဖွဈသူ အာဗွဲစိနျအတှကျ ဂုဏျယူနတေဲ့ မငျးသားကွီးနမြေိုးအောငျ... - ပညာ ပါဝါ
မွကှေကျတှကေို အခြိနျခဏအတှငျးမှာပဲ သိနျး ခုနှဈထောငျကြျောဖိုးအထိရောငျခနြိုငျခဲ့တဲ့ ဇနီးဖွဈသူ အာဗွဲစိနျအတှကျ ဂုဏျယူနတေဲ့ မငျးသားကွီးနမြေိုးအောငျ…
admin . admin | 24/03/2022 | Celebrity | No Comments
တဈခြိနျကအားပေးခဲ့ရတဲ့မငျးသားကွီးနမြေိုးအောငျကတော့ စှယျစုံရမငျးသားတဈလကျဖွဈပွီး ဘယျလိုဇာတျရုပျမြိုးမှာမဆိုပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျမှုတှကွေောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးမှုကို ဒီနအေ့ထိရရှိနတောဖွဈပါတယျ
လကျရှိမှာ မငျးသားကွီးနမြေိုးအောငျက အနုပညာအလုပျအပွငျ ဇနီးသညျရဲ့ အလုပျတှကေိုလညျး ဘေးနားက ကူညီပေးနတောဖွဈပါတယျ ။ နမြေိုးအောငျရဲ့ ခဈြဇနီးလေး အာဗွဲစိနျကတော့ လိုငျးပျေါမှာ မွကှေကျတှနေဲ့ အခွားတနျဖိုးကွီးအရာတှကေို Live လှငျ့ရောငျးခနြတောပဲဖွဈပါတယျ
ဒီနမှေ့ာတော့ နာရီပိုငျးအတှငျးမွကှေကျတှအေမြားကွီးရောငျးလိုကျရတဲ့ခဈြဇနီးလေးအာဗွဲစိနျအတှကျ မငျးသားကွီးနမြေိုးအောငျက ဂုဏျယူကွောငျးပွောလာတာဖွဈပါတယျ။Wow!!! မွေ Live ဘုရငျမကွီး အာဗွဲစိနျ တဈနာရီအတှငျး သိနျး ၇၀၀၀ ကြျောဖိုး ရောငျးလိုကျရတယျတဲ့Congratulations ဆိုပွီးပွောပွလာတာဖွဈပါတယျ။
တစ်ချိန်ကအားပေးခဲ့ရတဲ့မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ကတော့ စွယ်စုံရမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုဇာတ်ရုပ်မျိုးမှာမဆိုပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကို ဒီနေ့အထိရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်က အနုပညာအလုပ်အပြင် ဇနီးသည်ရဲ့ အလုပ်တွေကိုလည်း ဘေးနားက ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ။ နေမျိုးအောင်ရဲ့ ချစ်ဇနီးလေး အာဗြဲစိန်ကတော့ လိုင်းပေါ်မှာ မြေကွက်တွေနဲ့ အခြားတန်ဖိုးကြီးအရာတွေကို Live လွင့်ရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေ့မှာတော့ နာရီပိုင်းအတွင်းမြေကွက်တွေအများကြီးရောင်းလိုက်ရတဲ့ချစ်ဇနီးလေးအာဗြဲစိန်အတွက် မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်က ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။Wow!!! မြေ Live ဘုရင်မကြီး အာဗြဲစိန် တစ်နာရီအတွင်း သိန်း ၇၀၀၀ ကျော်ဖိုး ရောင်းလိုက်ရတယ်တဲ့Congratulations ဆိုပြီးပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေမှုန်ရတီဆိုတာနဲ့ သူမတင္မဟုတ္ပဲ သူ့ညီမေလ်းဖစ္တဲ့ျေငမှုန်ရတီကိုပါတြဲ်မင္မိကြတာပါ။ျေငမှုန်ရတီကေတာ့ ရွှေမှုန်ရတီလိုရုပ်ရင္ဇြာတ္ကားကြီးတြေနဲ့အနုပညာလောကမြာ မေတြ့ရပဲ လြတ္လျပ္စာနေထိုင်သူတစ်ဦ်းဖစ္ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ရွှေမှုန္နည်းတူျေငမှုန်ရတီကိုလည်းပရိသတ်တြေခ္စ်နေရတာပါ။ျေငမှုန်ရတီဟာ သီခ်င်းလေးတြေလည်း သီဆိုလေ့ရြိတာပါ။သူဆိုတဲ့သီခ်င်းလေးတြေတိုင်းကလည်း ပရိသတ်တြေအားပေးမှုမ်ာျးစာနဲ့ အောင်မင်နေတာပါ။သူမဟာ အနုပညာလှုပ်ရြားမှုတြေနည်းပေးမယ့်လည်း လူမှုကြန်ရက္မြာတော့ပုံရိပ်လေးတြေအမြဲတင်ပေးလေ့ရြိပါတယ်။
ခုမြာလည်းပရိသတ်တြေကိုအံ့အားသင့်စေတဲ့ပုံရိပ်လေးကိုလူမှုကြန်ရက္မြာတင္ထားတ်ာဖစ္ပါတယ်။သူမနဲ့အတူ ဘေးကေကာင်လေးတစ်ယောက္နဲကားထဲကပုံရိပ်လေးကိုတင္ထားတာပါ။ပရိသတ်တြေလည်း ဘယ်သူလဲဆိုတာသိစေခ်င္မြာ်ဖစ္တာကြောင့်အောက္ကပုံရိပ်လေးကိုကြည့်ပြီးဘယ်သူလဲဆိုတာေ်ပာသြားကြပါဦးနော်။
ဇာတိမွမှော အလှူလုပျနတေဲ့ပုံရိပျလေးတှေ တငျပေးလာတာကွောငျ့ ပရိတျသတျတှေ အခဈြပိုနရေတဲ့ ဖွူဖွူထှေး..
အဖမြေားနမှေ့ာ သူမဘဝရဲ့ ရှတေောငျကွီးဖွဈတဲ့ ဖခငျဖွဈသူကို ပရိတျသတျနဲ့ မိတျဆကျပေးလာတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး မိုးဟကေို…
မွနျမာဝတျစုံတှနေဲ့လညျး ကကျြသရရှေိရှိလှပနပွေနျတဲ့ မတျမတျသငျဇာရဲ့ပုံရိပျလေးမြား…